Wasiir Fiiqi oo ka ahor Yinid Amar ka ayimid Dowlada Federaalka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiir Fiiqi oo ka ahor Yinid Amar ka ayimid Dowlada Federaalka
Wararka ka imaanaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in masaajid kuyaala magaaladaasi maanta si qasab ah u xireen ciidamada booliiska ee saldhiga Guriceel.
Masjidkan maanta la xiray oo sanado badan u xirnaa amar kasoo baxay kooxda Ahlu Sunna ee katalin jirtay magaaladaasi ayaa dhawaan dib loo furay kadib markii meesha ka baxday awoodii kooxda Ahlu Sunna.
Taliyaha booliiska saldhiga Guriceel ayaa la sheegay in maanta amar ku bixiyay in la xiro masjidkan oo dib u furistiisa kasoo horjeedeen qaar kamid ah bulshada Guriceel gaar ahaan kuwa taageersan fikirka kooxda Ahlu Sunna.
Mid kamid ah culimada masjidkan gacanta ku heysa ayaa sheegay in amar kasoo baxay taliska booliiska Saldhiga Guriceel lagu xiray Masjidka, waxa uuna tilmaamay in dadka bixiyay amarkan masjidka lagu xiray ku fikir yihiin kooxdii Ahlu Sunna .
Waxa uu sheegay Wadaadkan in dhawaan dhalinyaro iyo haween magaalada degan isku dayeen in ay gubaan masjidkan dib loo furay, balse arintaasi kahor tageen dadka kunool xaafada uu masjidkan kuyaalo.
Wasaarada Amniga maamulka Galmudug ayaa kahor timid amarka Masjidkan maanta lagu xiray, waxa ayna Wasaarada fartay booliiska in arimaha Masaajida faraha kala baxaan ayna tahay arintaasi mid u taala Wasaarada Owqaafta iyo arimaha Diinta.
Deegaanada kooxda Ahlu Sunna gacanta ku heysay ayaana horey looga ogoleyn in laga furo Masaajida iyo dugsiyada Quraanka aan ku fikirka aheyn kooxda Ahlu Sunna, hasa ahaatee markii meesha ka baxday Ahlu Sunna ayaa laga furay masaajid iyo dugsiyo horey u diidi jireen.
Previous articleDuuliya Jabuutiyaan ah oo Fariin ka soo diray Xabsi looga Dhigay Suuli dhaxdiisa
Next articleShirkii Golaha Wasiirada Soomaliya oo Laga Dooday arima Badan oo quseey
Dab xoogan oo markale ka kacay Dekada magaalada Beirut ee dalka...